कोरोना खोप निर्माणमा लाग्यो ठूलो धक्का – Rapti Khabar
काठमाडौं, भदौ २४ कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप निर्माणमा ठूलो धक्का पुगेको छ। परीक्षण खाेप लगाएका एक जना बिरामी परेपछि खाेप निर्माता अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जारी परीक्षण रोक्न बाध्य भएको हो।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेकाे खोप एस्ट्राजेनेका कम्पनीले ठूलाे मात्रामा उत्पादन गरिरहेकाे छ। अहिले याे खाेपकाे तेस्राे चरणकाे परीक्षण विश्वका दर्जन ठाउँमा चलिरहेकाे छ।
तर परीक्षण खाेप लिएका एक जना बिरामी परेपछि तत्काललाई परीक्षण स्थगन गरिएकाे एस्ट्राजेनेकाले जनाएकाे छ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेकाे खोप नै सबैभन्दा पहिले बजारमा आउने अपेक्षा छ।
अब एउटा स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी खोपको सुरक्षा र प्रभावकारिताबारे समीक्षा गरिनेछ र त्यसपछि मात्र नियामक निकायले फेरि परीक्षण थाल्ने वा नथाल्ने निर्णय दिनेछ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रवक्ताले ठूलो मात्राको परीक्षण भइरहका बेला एक सहभागी बिरामी परेको घटनाले शंका उत्पन्न गराएको उल्लेख गर्दै यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन स्वतन्त्र ढंगले पुनःपरीक्षणको आवश्यकता देखिएको बताएका छन्।
अक्सफोर्डले कोरोना खोपको परीक्षण स्थगन गरेको यो दोस्रोपटक हो। ठूलो मात्राको परीक्षणमा यस्तो हुनुलाई सामान्य मानिन्छ।
परीक्षण खोप लिँदा बिरामी परेका व्यक्तिलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ तर उसको रोग पत्ता लागिसकेको छैन। यसैकारण तत्काललाई परीक्षण रोकिएको हो। केही दिनमा परीक्षण पुनः सुरु हुने विश्वास गरिएको छ। बीबीसी
कोरोना लागे घरमै आइसोलेसनमा कसरी बस्ने, परिवारका सदस्य कसरी जोगिने?
कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढदै जाँदा अस्पताल भरिँदै गएका छन्। आउने दिनमा संक्रमण झनै बढ्ने देखिन्छ। संक्रमण बढेसँगै गम्भीर समस्या नदेखिएका बिरामी घरमै बस्ने क्रम बढ्ने छ।
‘होम आइसोलेसन’(घरमा अरू परिवारभन्दा अलग भएर)मा कसरी बस्ने, आफूलाई भएको संक्रमण परिवारमा कसरी सर्न नदिने भन्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय छन्।
‘होम आइसोलेसन’का दुई तरिका छन्। एउटा सबै परिस्थिति मिल्दा कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने। अर्को आ-आफ्नो घरको अवस्थाअनुसार कसरी सावधानी अपनाएर बस्ने।
त्यसरी घरमा बसेको बिरामीसँग परिवारका अरू सदस्य अलग्गै बस्नुपर्छ। बिरामी खाना दिँदा, ढोकामा बिरामीले प्रयोग गर्ने छुट्टै थाल बटुकामा खाना राखिदिने गर्नु पर्छ। ती थाल-बटुका अरूले नछुने, बिरामी आफैंले सफा गर्ने र आफ्नै कोठामा लगेर राख्ने गर्नुपर्छ। आइसोलेशनमा बसेको कोठाको, आफूले प्रयोग गर्ने बाथरूमको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। सरसफाइमा जति ध्यान दियो, त्यति राम्रो।
सहरमा बस्ने सबै परिवारका लागि छुट्टै कोठा र बाथरूमको सुविधा नहुन सक्छ। परिवारसहित फ्ल्याटमा भाडामा बस्नेहरूका लागि प्राय: एउटै शौचालय हुन्छ। त्यस्तो बेला शौचालय जाँदा संक्रमित व्यक्ति सबैभन्दा पछि जानुपर्छ। शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने, ढोकाको ह्यान्डिललाई स्यानिटाइजर अथवा साबुन पानीले सफा गर्ने गर्नुपर्छ। यो सबै काम संक्रमित व्यक्तिले नै गर्नुपर्छ। संक्रमित मान्छेले छोएर किटाणु लागेको छ भने साबुन पानी परेपछि मर्छ जसले गर्दा परिवारको अर्को सदस्यलाई सर्दैन। घरमै बोल्दा, हाछ्युँ गर्दा भाइरस सर्ने भएकाले सबैले मास्क लगाउने, घरभित्रै पनि सकेसम्म दुई मिटरको दूरी कायम गर्ने गर्नुपर्छ। संक्रमित व्यक्तिले धेरै गफ गर्ने, धेरै हाँस्ने गर्नुहुन्न।
कतिपय परिवार शहरमा एउटै कोठाम बस्छन्। धेरै परिवारले मिलेर शौचालय पनि एउटै प्रयोग गर्छन्। काठमाडौंजस्ता सहरमा एउटै फ्ल्याटमा दुई-तीन वटा परिवारसमेत बसेका हुन्छन्। उनीहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय पनि एउटै हुन्छ। एउटै कोठामा पनि दुई तीन जनासम्म पनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
कोठामा बस्दा सबैले मास्क लगाउनु पर्छ। एकअर्कासँग सकेसम्म बोल्नु हुँदैन। बोल्न परे मुखामुख गर्नु हुँदैन। अझ फरक-फरक दिशातिर हेरेर बोल्नु राम्रो हो।
स्यानिटाइजर र साबुन पानीको प्रयोग धेरै गर्ने हात हरदम सफा राख्ने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा रोग सर्ने सम्भावना कम गर्न सकिन्छ।
खानपिनको हकमा प्रशस्त मात्रामा तरल पदार्थ खानुपर्छ। बेसार, तुलसीको पत्ता,अदुवा,कागती खान हुन्छ। यिनले भाइरससँग लड्ने क्षमता बढाउँछन् भन्ने वैज्ञानिक आधार भने अहिलेसम्म भेटिएको छैन। तर यी खाने कुराले शरीरलाई फाइदा गर्छन्। यिनमा ‘एन्टी अक्सिडेन्ट’ हुन्छ, जसले सामान्य रूपमा शरिरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछन्। तर कोरोना भाइरससँगै लडन सक्ने क्षमता बढाउँछन् भन्ने छैन। यस्ता कुरा ठिक्क मात्रामा खानु पर्छ, धेरै खायो भने त्यसले शरिरमा हानी गर्छ।
कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने?
(वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको इन्टरनल मेडिसिन विभाग प्रमुख प्राध्यापक सञ्जीवकुमार शर्मासँग सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले गरेको कुराकानीमा आधारित)